कञ्चनपुरको लालझाडीमा सिपमुलक तथा बुनाई तालिम समापन - RanaTharu
कञ्चनपुरको लालझाडीमा सिपमुलक तथा बुनाई तालिम समापन
नरेश राना /लालझाडी,२४ माघ ।
कञ्चनपुरको लालझाडी गाउपालिका वडा नं. ४ मा रहेको कञ्चन सामुदायिक वन उपभोक्ता समुहले १ महिना सिप विकाश तथा बुनाई तालिम शुक्रबारको दिन समापन भएको हो सो समापन कार्यक्रममा वुनाई लिएका सहभागीहरुलाई प्रमाण पत्र वितरण गरीएको हो ।
सो कार्यक्रममा प्रमुख अतिथी वडा नं. ४ का वडा अध्यक्ष बहादुर राना रहनुभएको थियो । वहाँले यस सामुदायिक वनलाई यस लालझाडी अन्तर्गत पर्ने सामुदायिक हरु मध्ये एकको रुपमा भनिएको हो । किनभने लालझाडी अन्र्गतका सामुदायिक वनले गरेका छैन र यस सामुदायिक वनले आउदा निमा यस्तै होजीयारी तालीम गरोस र हाम्रो वडाबाट हुने सहयोग गर्छौ भनी भनाइए राखेका थिए ।
यसैगरी विश्ष्टि अतिथीमा रहेका लालझाडी समन्वय समिति वाणीका सचिब नरेश भट्टले यस सामुदायिक वनले आप्नै लगानीमा यस्ता ठुला ठुला कार्यक्रम पनि गर्ना सफल भएको छ । वनबाट हुने आम्दानी लाई यस्ता काम कामहरुमा लगाउनु राम्रो कुरो बताए ।
अझ यस्ता कामहरु गर्दै जाओस र समन्वय समिति तथा तालपरियोजनाले पनि सहयोग गर्ने बताए । कार्यक्रमका सभापति कञ्चन सामुदायिक वन उपभोगता समुह का अध्यक्ष जगन्नाथ राना रहनु भएको थियो वहाँले यो सामुदायिक वन मा हामी सबै मिलि यसलाई अगाडी बढाउने बताउनु भयो ।
कार्यक्रमा स्वागत मन्तव्य सामुदायिक वनका कोषाध्यक्ष नन्दराम रानाले स्वागत मन्तव्य गर्नुभएको थियो भने कार्यक्रमको सञ्चालन सामुदायिक वनका सचिब बन्धो रानाले गरेकी थिइन ।